InVision: Prototyping, fiaraha-miasa ary workflow | Martech Zone
Saturday, May 30, 2015 Alarobia, Jona 17, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay, naharay mailaka misy rohy eo ambony aho izay nilaza fa namorona mailaka vaovao ireo olona ary maniry ny hevitray. Notsindriako ilay rohy ary prototypa azon'ny besinimaro nalaina tamin'ny famolavolana mailaka vaovao nataon'ny orinasa izy io. Rehefa nijery ilay pejy aho dia nisy toerana mafana (faribolana mena) azo isaina azo zahana ary nisy ny fanehoan-kevitra tena manokana natolotr'ireo olona mitsidika ilay pejy.
Notsindriako ny faritra iray izay noheveriko fa mety hisy fihatsarana, ary nisy dinika nisokatra ho ahy mba hidirako ny hevitro ary avy eo nangataka ny anarako sy ny adiresy mailaka aho. Ny interface interface dia tsy nitaky torolàlana - Fantatro tsara izay azoko atao.
Tena tsara ilay sehatra ka voatery nitsidika ny pejy fandraisana aho, Invision. Azonao atao ny manandrana ny sehatra ho an'ny tetikasa 1 tsy andoavam-bola ary avy eo ny tetikasa manaraka dia mitaky sarany isam-bolana mora vidy. Ny drafitra rehetra ananan'izy ireo dia misy ny enkripsi 128 bit SSL sy ny backup isan'andro.
Invision ahafahan'ny mpampiasa mampakatra ny volavolany sy manampy toerana mafana hanovana ny efijery mijanona ho prototypes interactive izay feno fihetsika, fiovana ary sarimiaina. Anisan'ireo manasongadina ny fanaraha-maso ny kinova, ny fitantanana ny tetik'asa ary ny prototyping ho an'ny tranonkala, finday sy tablety, ny fahaizana maneho sy mizara ny endrika, ary ny tsindry sy ny fitaovana fanehoan-kevitra hanangonana hevitra momba ny endrika.
Tags: fiaraha-miasafiaraha-miasa amin'ny famolavolanaInvisionfampiharana invisionprototypingMalagasy famolavolanafitantanana tetikasa tranonkalaWorkflow